Forum Stats ကျသွားခြင်း
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Help and Feedback » Forum Stats ကျသွားခြင်း
1 Forum Stats ကျသွားခြင်း on 3rd March 2010, 7:11 pm
ကျနော်တို့ရဲ့ MITR Forum ကြီး stats တွေ ကျသွားလိုက်တာ မြင်တောင်မကောင်းဘူး
Member တွေကော ၊ Admin တွေ ၊ Mod တွေပါ နည်းနည်းလောက် ပြန်ပြီး Active ကြပါဦး။
ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် Active ဖြစ်ပါ့မယ်။
ကဲ အားလုံးဘဲ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ MITR ကို အကောင်းဆုံး IT အရင်းအမြစ်ကြီး ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ကြရအောင်။
2 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 3rd March 2010, 7:25 pm
အင်း အစ်ကိုလည်းပြန်လုပ်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးတယ် အခုနည်းနည်းအားနေလို့ ဟီး
3 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 3rd March 2010, 8:48 pm
ကျနော်လည်းမနက်ဖြန်ကျရင် နေ့လည်ပိုင်းကိုအားတယ်.. ၀င်ပေးမယ်... ပို့စ်တွေလည်းတင်ပေးပါ့မယ်... အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်.... ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း5ရက်လောက်ပျောက်စရာရှိတယ်... အဲဒါတော့ နားလည်ပေးပါ... အားတာနဲ့ ဖိုရမ်မှာရှိနေမယ်...
4 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 4th March 2010, 8:07 am
Forum Admin3ဦးရှိပါတယ်။
$ƴǩǾ က စာမေးပွဲရှိလို့ April5ရက်အထိ ခွင့်ယူထားပါတယ်။
alt.332 လဲ ဒီလိုပါပဲ။
လောလောဆယ် ဖိုရမ် မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်။ (Admin တွေထဲက)
ကျွန်တော်လဲ တတ်နိုင်သလောက်တော့ တင်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း (MD ပြန်ခါနီးဆိုတော့) အလုပ်တော်တော်လေးရှုပ်နေလို့ ပို့စ်တွေသိပ်မတက်နိုင်တာပါ။
အဲဒီအတွက်လဲ Admin တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Mod တွေလဲ တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပေးကြပါ လို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
5 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 4th March 2010, 7:27 pm
ကျနော်လဲ Mod အဖြစ်ဝင်ကူပေးမှပဲ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခက်အခဲလေး နဲနဲဖြစ်နေတာနဲ့ 
ဖိုရမ်နဲ့အဆက်ပြတ်နေတယ်ဗျာ
နောက် ထပ် သုံးလေးရက်လောက်ကြာဦးမလားမသိဘူး..
6 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 4th March 2010, 9:27 pm
Yeah Me2!
Sorry for bad con !
so sad 10 secs 1 Down :cry
7 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 5th March 2010, 6:29 pm
ဒါပေမယ့်လည်း Forum Stats; က Admin Team နဲ့က တိုက်ရိုက် ပတ်သက်မနေပါဘူး။
Forum ဆိုတာ Admin အဖွဲ့နဲ့ဘဲ ဆိုင်တာမှမဟုတ်တာ။ Member တိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်နေတာပါ။
ဖိုရမ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်း ၊ Member တိုင်းရဲ့ Active ဖြစ်နိုင်မှု ၊ Contributor များများရှိမှုတွေဟာ Forum ရဲ့ stats; ကို ထိန်းပေးနေပါလိမ့်မယ်။
အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ Admin Team ကလည်း ဘာကြောင့် ၊ ညာကြောင့် ၊ အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးနေမယ့်အစား ကိုယ်ဝင်နိုင်တုန်းလေးမှာ အများအတွက်ဆိုပြီးတော့ Article ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်သွားမယ် ၊ မေးသွားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ရှိလို့ ကိုယ်က သိနေတယ်ဆိုရင် ဖြေသွားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေတာပေါ့။
နောက်ပြီး Member တွေကလည်း မေးနေဖို့တင်မဟုတ်ဘဲ ၊ ကိုယ်သိတာ တတ်တာလေးတွေကို မျှဝေပေးကြပေါ့။ ကိုယ်သိထားတာက သေးသေးလေးဖြစ်နေရင်တောင် ဖိုရမ်ထဲမှာ မရှိသေးတဲ့ Post မျိုးဆိုရင် တင်ပေးလိုက်တော့ အများအတွက်လည်း အကျိုးရှိတာပေါ့။
ပြီးတော့ Member အချင်းချင်း ဖြစ်လာတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို အတူတူဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ရင်းနှီးမှုလေးတွေ ပိုလာမယ်။ တစတစနွေးထွေးမှုပိုဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် ကျန်တာဘာလိုသေးလဲဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း မအားလို့ စာမရေးနိုင်သေးတာကိုတော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလည်း အချိန်ရသလောက် ၀င်လာပေးနေပါတယ်။
အားလုံးဘဲ တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်.........
8 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 6th March 2010, 7:51 am
member များရဲ့ post and reply ကိုပိုပြီးအားကိုးပါတယ် မကြောက်ပါနဲ့ ရဲရဲသာရေးမှားရင် ဘာမပြောဘူးစိတ်ချ
ပေါက်ကရတော့မရေးနဲ့ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား :cry
9 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း on 9th March 2010, 9:03 am
အား လုံး စိတ် မပျက်ပါ နဲ. ဒီ လို ပဲ ဖြစ် တတ်ပါတယ်၊ ဘယ် အရာ မှ အလွယ် တ ကူ မဖြစ်လာပါ ဘူး။
အခု လက် ရှိအခြေအနေ မှာ အကောင်း ဆုံး စေတနာ ထား ပြီး လုပ် သွား ရ မှာ ပါ ပဲ။
ကျနော် က IT professional မဟုတ် ပေ မဲ့ ကြိုးစား ပြီး တတ် နိုင် သလောက် ပါ ၀င် ကူ ညီ သွား မှာ ပါ။
ဒီ နေ. (၉.၃.၂၀၁) ၁ နှစ် ပြည်. forum မွေး နေ. က နေ စပြီး .....................................................................
10 Re: Forum Stats ကျသွားခြင်း